Factlọ ọrụ na-emepụta akwụkwọ nri ngwa ngwa oyi kpọnwụrụ - ndị na-eweta ngwa ngwa ngwa ngwa nke ngwa ngwa nke China
Okwu mmeghe Dekọọ ihe eji arụ ọrụ, ọkachasị poteto anụ ọcha. Nkọwapụta ngwaahịa 10mm 、 15mm 、 17mm ， Randomcut3.5g / 6g / 7g Njirimara ngwaahịa Tee ọwa Kwesịrị ekwesị maka nhazi nri, ụlọ oriri na ọ restaurantụ restaurantụ na ụlọ ọrụ ndị ọzọ. Ọnọdụ nchekwa Cryopreservation n'okpuru -18 system Ngwa kpụkọrọ akpụkọ ozugbo. Usoro CAS na-eme ka ikuku mmiri na-arụ ọrụ na magnetik na-agbanwe agbanwe, nke na-ewepụta obere ike site na mgbidi iji mee ka mmiri mmiri dị na ...
Nkwalite ngwaahịa Ngwaahịa sitere na ihe ndekọ ihe oriri na ihe oriri。 Nkọwapụta ngwaahịa Cut size5mm 、 10mm Njirimara ngwaahịa Tinye ọwa Kwesịrị ekwesị maka nhazi nri, ụlọ oriri na ọ restaurantụ restaurantụ na ụlọ ọrụ ndị ọzọ. Ọnọdụ nchekwa Cryopreservation n'okpuru -18 system Ngwa kpụkọrọ akpụkọ ozugbo. Sistemụ ikuku CAS bụ nchikota nke magnetik na-arụ ọrụ na magnetik na-agbanwe agbanwe, nke na-ewepụta obere ike site na mgbidi iji mee ka mmiri mmiri dị na nri dị obere na edo, na ...
Nkwalite ngwaahịa Site na ntọala ndekọ, ojiji nke ụdị karọt atọ na-acha uhie uhie nke Japan, agba agba, ọnụ ụzọ dị ụtọ. nkọwapụta Dising, shred, slice. Nabata omenala Ngwaahịa Tee ụzọ dị mma maka nhazi nri, agbụ ụlọ oriri na ọ andụ andụ na ụlọ ọrụ ndị ọzọ。 Ọnọdụ nchekwa yochekwa Cryopreservation n'okpuru -18 ℃ Ngwa kpụkọrọ akpụkọ ozugbo. Usoro CAS na-ekpo ọkụ bụ njikọ nke magnetik na-arụ ọrụ na magnetik magburu onwe ya, nke na-ewepụta obere ike site na ...